नीलम पत्थर अर्थ। रिंग, हार, झुम्का रूपमा गहनाहरूमा अक्सर प्रयोग गर्नुहोस्
ट्याग नीलम, क्वार्ट्ज
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक नीलम किन्नुहोस्
नीलम पत्थर अर्थ। नीलम अक्सर गहनाहरूमा रिंग, हार, झुम्का, ब्रेसलेट र पेंडन्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ। रक, जिओड, क्लस्टर, मोतीको रूपमा पनि फेला पार्नुहोस्
प्राकृतिक नीलम क्रिस्टलीय क्वार्ट्जको बैजनी रंगको विविधता हो। फलामको अशुद्धताको प्राकृतिक इरिडिएसनका कारणले यसको वायोलेट रंग णी छ। केहि अवस्थाहरूमा संक्रमण संक्रमण अशुद्धताको साथ संयोजनको रूपमा। ट्रेस एलिमेन्ट्सको उपस्थिति परिणामस्वरूप जटिल क्रिस्टल ल्याटिस प्रतिस्थापन हुन्छ। साथै, खनिजको कडाई क्वार्ट्ज जस्तै छ। तसर्थ यो गहनाको लागि अफोर्डेबल मूल्य संग उपयुक्त छ।
नीलम रत्न प्राथमिक रंगमा हुन्छ। हल्का गुलाबी बैजनी देखि गहिरो बैजनी। यसले एक वा दुबै माध्यमिक रuesहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ: रातो र निलो। साइबेरिया, श्रील Lanka्का, ब्राजिल र एशिया पनि उत्तम प्रजातिहरूको खान स्रोत हुन्। डीप साइबेरियन आदर्श ग्रेड नाम हो। योसँग 75 / 80% नीलो, वरिपरि 15 / 20% को एक प्राथमिक बैजनी रंग छ। प्रकाश स्रोतमा निर्भर गर्दछ। हरियो क्वार्ट्ज पनि गलत भनिन्छ हरियो नीलम। यो ढुङ्गाको लागि उपयुक्त नाम होइन। उचित शब्दावली हो prasiolite। को लागि अन्य नाम हरियो क्वार्ट्ज हो vermarine or lime citrine.
प्राकृतिक परमाणुको रंग प्रायः हटाइन्छ। क्रिस्टलको अन्तिम अनुहारहरू स्ट्रिपहरूबाट। साथै, लेपोदिरीको कलामा एक पक्ष समावेश गर्दछ पत्थर काट्न सही। रङ ज्यानिङले समाप्त गेमको सजावटको टोन बनाउँछ। अक्सर, बैजनीको रंगमा मात्र एक पतली सतह तहको अवस्थित छ। रंग असोज्य एक मुश्किल काटने को लागि बनाइएको छैन।
रङ संरचनामा सिलिकनको लागि छोटो लोहे (Fe3 +) को विकिरण द्वारा प्रतिस्थापन बाट परिणाम हो। ठूलो आयनिक त्रिज्या को ट्रेस तत्वहरु को उपस्थिति मा। एक निश्चित हद सम्म पनि, क्वार्ट्ज रंग प्राकृतिक रूप देखि संक्रमण को विस्थापन देखि परिणाम हुन सक्छ। फलाम एकाग्रता कम छ भने तत्वहरू। प्राकृतिक पत्थर रातो बैंगनी र निलो बैंगनीमा डाइचिरोक हो। तर जब गरम हुन्छ, यसले पहेंलो-सुन्तला बदल्छ। यो पनि पहेंलो-खैरो, वा गाढा खैरोश हुन सक्छ। यो हुन सक्छ सिट्रीन, तर यसको डचिरोम हराउँछ, वास्तविक विपरीत सिट्रीन.
नीलम रत्न टोनमा फीका हुन सक्छ यदि प्रकाश स्रोतहरूमा ओभररेक्सपोष्ट गरियो। यो पर्याप्त विकिरणको साथ कृत्रिम अँध्यारो पनि गर्न सकिन्छ।
नीलमको अर्थ, शक्तिहरू, लाभहरू, उपचार र मेटाफिजिकल गुणहरू
निम्न खण्ड छद्म वैज्ञानिक र सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित छ।
नीलम आध्यात्मिक सुरक्षा र शुद्धिकरणको एक ढु stone्गा हो, यसले नकारात्मक प्रभावहरू र संलग्नकहरूको उर्जा क्षेत्र सफा गर्दछ, र शरीरको वरिपरि आध्यात्मिक ज्योतिको एक गुनाहक ढाल सिर्जना गर्दछ। यसले कम ऊर्जा, साइकिक अट्याक, जियोपाथिक तनाव र अस्वास्थ्यकर वातावरणको विरूद्ध बाधाको रूपमा कार्य गर्दछ।
एथिसस्ट एक अर्धवृत्त पत्थर हो र फेब्रुअरीका लागि पारंपरिक जन्मदिन हो।
नीलम, Ratanakiri, कम्बोडिया देखि
हामी रि ring्ग, हार, झुम्का, ब्रेसलेट र पेंडन्टको रूपमा नीलमको गहना बनाउँदछौं। यो वास्तवमै पुरुषको लागि औठीको रूपमा लोकप्रिय विवाह हो, सुनको औठी, वा हीराको औठीको साथ सेट
मार्कासाइटको साथ क्वार्ट्ज
ट्याग मार्कासाइट, क्वार्ट्ज
सुनौलो रूमले क्वार्ट्जलाई हेमाटाइटको साथ
ट्याग सुनको, हेमाटाइट, क्वार्ट्ज, रूटाइएको
ट्याग हकको आँखा, क्वार्ट्ज
ट्याग नीलम, Trapiche